Xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun Waa Xildhibaanka Aqlabiyada Shacabka.
Tuesday October 12, 2021 - 11:03:59 in Articles by Hadhwanaag News
Waxa qoray Siciid Cagjar
Xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun waa Masuul ka tirsan mudanayaasha golaha Wakiillada Somaliland ahna Xildhibaanka Aqlabiyada Shacabka.
Xaqiiqdii waa Masuul ay u kala saaran tahay Mucaaradnimada iyo Qaranimadu haddii uu yidhi dawladda waan ku garab taagnahay sugidda amniga dhiiga bulshaduna dheeman wuu ka qaalisan yahay waxa ay reer Soomaaliya ku eryadaan waa khalad.
Inta Ogaalkay ah Barkhad Soomaaliya lacag kama dalban olallena kama dalban balse iyaga iskood u sacaba tumay haddii ay ku taageerayeen Somaliland ayuu kasoo horjeesanayaa ama dawladdiisa ayuu sax iyo khaladba ku Mucaaradayaa walee gudcur bay gudeen.
Ninkan 15, 000 lagu khuukhinayaa bulshadiisu Caawa ayey 1milyan siin karaa oo dhiigooda ayey u huri karaan.
Xildhibaanada Somaliland beesha Caalamku Mushahar ma siiso sida kuwa Soomaaliya ee waxa laga siiya Cashuurta ay bixiyeen shacabka fartooda ku doortay, taangiyo laguma ilaaliyo ee dhulkooda ayey nabad ku mushaxaan marka yaan ragga safafka dhaadheer loo galay dhalay la moodin.
Somalilandnimadu Waa Waajib